टेक्सास होल्डम शुरुआतीहरूको लागि - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » टेक्सास होल्डम » टेक्सास होल्डम शुरुआतीहरूको लागि
के यो जुवा खेल्ने तरिका हो?
टेक्सास होल्ड’ममा अनुसरण गर्न आधारभूत रणनीति
नियमित होल्डम खेलाडीहरू बिरूद्ध कसरी जित्ने
पोकरमा हातको बल
तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पूर्व फ्लप रणनीति
टेक्सास होल्डम पोष्ट-फ्लप खेल्दै
टर्नमा प्ले गर्दै
स्थितिमा खेल्दा फाइदा
टेक्सास होल्डम खेल्न को लागी एक जटिल कार्ड खेल जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो मजा छ र सही मार्गदर्शन र स्रोतहरू दिएर सिक्न सजिलो छ। र यदि तपाइँ खेल जान्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं सही पृष्ठ र स्रोतमा आउनुभयो। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई खेलको मेकानिक्स बुझ्न सहयोग गर्दछौं। यो लेख र मार्गनिर्देशन यो धारणा संग लेखिएको छ कि तपाईंसँग खेलको मौलिक ज्ञान छ र तपाईं जुन कुरा तपाईंलाई थाहा छ विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ।
हामी यसमा खैरो क्षेत्रमा छौं। एक सुरुवातको लागि, तपाइँले यो जान्नुपर्दछ कि यो खेल जुवाको रूपको रूपमा योग्य हुनेछ किनकि तपाइँलाई दिने कार्डहरू, वा अन्य प्लेयरहरूको कार्डहरूमा, वा कुन फ्लपमा आउँछ भन्नेमा तपाइँको नियन्त्रण छैन। के तपाईं यहाँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ पैसाको राशि हो जुन तपाईं भाँडामा हाल्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलव तपाईको नियन्त्रणमा छ तपाईको बैंकरोललाई के हुन्छ।
तपाईं अनुकूल परिस्थितिमा आधारित भाँडोमा राख्नुहुनेछ भन्ने पैसाको प्रबन्ध गरेर, र फोल्डि you गर्दा जब तपाईंलाई लाग्छ कि परिस्थिति तपाईंको पक्षमा छैन, तपाईं पोकरको खेलमा जित्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, त्यहाँ एक ठूलो मौका यो छ कि तपाईं नियन्त्रण गर्न नसक्ने परिस्थितिको कारण गुमाउनुहुनेछ। तर यी घाटाहरू राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिन्छ यदि तपाईं खेलमा भाग लिने अन्य खेलाडीहरूको तुलनामा राम्रो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।
पोकरको खेलमा, लडाई हातको मूल्यको बीचमा हुन्छ। प्रतिस्पर्धी हातहरू बीचको शोडाउन सुरु हुन्छ जब तपाईंलाई दुई प्वाल कार्डहरू दिइन्छ। यहाँ रणनीति फ्लप भन्दा पहिले राम्रो हात संग सम्भव छ। यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं नियमित पोकर तालिकामा १ 18 देखि २०% हातहरू खेल्नुहोस्।
खेलमा तपाईको सफलता तपाईले खेल्नुहुने र खेल्ने कार्डहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं केहि कार्डहरू राख्नुहुन्छ भने, त्यसो भए यो तपाईंलाई लाभदायक लाभका साथ पुरस्कृत गर्दैन। त्यहाँ एक मौका छ कि तपाईं कमजोर हातहरूमा पैसा गुमाउनुहुनेछ जुन राम्रो हातहरूले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन। अनुभवी खेलाडीहरूले सँधै कडा खेल्न सुझाव दिन्छन्।
यदि तपाइँ क्यासिनोमा नियमित पोकर खेलहरूमा भाग लिनुहुन्छ भने, तपाइँले पत्ता लगाउनु हुनेछ कि प्राय: खेलहरू ढीला र धेरै खेलाडीहरू उनीहरूको हातको %०% खेल्छन्। दिमागमा राख्नुहोस् कि जब उनीहरू कमजोर हातहरू फ्लप भन्दा पहिले खेल्छन्, तिनीहरूले फ्लप पछाडि उही हातको मानहरू पनि तान्नेछन्। कमजोर हातहरू टेबलमा दोस्रो सर्वश्रेष्ठ हुन्, र तपाईं अन्य खेलाडीहरू द्वारा खेलेका यी कार्डहरूको फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ।
खेलको मुख्य उद्देश्य सबै पाँच समुदाय कार्डहरू व्यवहार गरिसके पछि उत्तम हातले ल्याउनु हो। यो भन्न असम्भव छ कि यदि तपाईंको हात पर्याप्त राम्रो छ किनकि हातको मूल्य र महत्त्व पनि अरूमा निर्भर गर्दछ। तर यदि तपाईं धेरै जसो समय कडा खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईं राम्रो हात र कम कमजोर हातले आउन सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक हातको बखत, तपाईंले जहिले पनि बोर्डमा कार्डहरू विचार गर्नुपर्नेछ र उनीहरूले गठन गर्न सक्ने हात संयोजनहरू। यस कार्ड खेलमा, सही निर्णयहरू लिन सूचना महत्वपूर्ण छ।
तपाईंले फ्लप खेल्न सक्नु अघि, तपाईंलाई पहिले पहिलो दुई कार्डहरू तयार गर्नु आवश्यक पर्दछ जुन तपाईंलाई तपाईंलाई सुम्पिएको छ। प्रारम्भिक उद्देश्य एक शीर्ष जोडी, वा बोर्डमा कुनै अन्य जोडीको संयोजनको साथ आउनु हो जुन एक महान किकरको साथ फ्लप पछि तपाईंको दायाँ भन्दा बढी हुन सक्छ। अर्को विकल्प भनेको हातको साथ आउनु हो जुन फ्लश वा सिधा जस्तो ‘ठूलो हात’ बनाउने राम्रो मौका हुन्छ।
KK, QQ, JJ र AA खेल्दै
यी पोकरको खेलमा बहुमूल्य हात हुन्। शोडाउनको क्रममा, एक जोडीलाई उत्तम मानिन्छ। र यदि तपाईंलाई यी कार्डहरूसँग व्यवहार गरियो भने, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई उठाउनुहोस्। यदि तपाईं AA-KK वा QQ राख्नु हुन्छ, तपाईं जहिले पनि उठाउनु पर्छ र उठाउनु पर्छ।
AK-AJ र KQ खेल्दै
यी कार्डहरू फ्लपमा लाग्यो; तिनीहरू एक उत्तम किकरको साथ शीर्ष जोडी सिर्जना गर्न संयोजन गर्न सक्दछन्। किकरहरू यस कार्ड खेलमा महत्त्वपूर्ण छन् किनकि पोकर खेलाडीहरूले उस्तै जोडी फ्लप गर्नेछन्, र केवल किकरले टाई भंग गर्नेछ। यदि तपाईंसँग एउटा जोडी छ भने, किकर खेलमा आउनेछ। किकरको साथ तपाईको जीतको सम्भावना बढाउन यो उत्तम छ कि तपाई जहिले पनि चुस्त हुनुहुनेछ। तपाईं पनि शीर्ष-जोडी खेल्न सक्नुहुनेछ यदि टेबलमा बनाइएको खण्ड छ भने। यदि कसैलाई उठाइएन भने, तपाईले हात उठाउन सक्नुहुनेछ यसको फ्लपको ठीक अघि।
उपयुक्त कनेक्टरहरू खेल्दै: QJs-89s
धेरै पोकर खेलहरूमा, केहि एमेच्योरहरू प्राय: कुनै पनि दुई उपयुक्त कार्डहरू खेल्छन्। यो एउटा गल्ती हो कि यदि तपाईंले घाटाहरू कटौती गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले टाढा बस्नुपर्दछ। तपाई सट्टामा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको उपयुक्त कनेक्टरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो किनभने यी सिधा र फ्लश ड्रहरू फ्लप गर्न सक्छन्। उपयुक्त वा जोडिएको पर्याप्त छैन; दुबै उपस्थित हुनु पर्छ
सूट गरिएका जडानहरूले तपाईंको पक्षमा काम गर्न सक्दछन् किनकि यसले तपाईंलाई खेलहरू जित्न मद्दत गर्दछ जब तिनीहरू स्ट्रिट र फ्ल्यासमा फर्म गर्दछन्। यद्यपि यी कार्डहरूले तपाईंलाई ठूलो जीतमा डोर्‍याउन सक्छ, हामी सिफारिस गर्दछौं कि यी बढाइमा जोड्नु पर्छ जबसम्म यसको उठाइ अत्यन्त सानो हुँदैन। तपाईं यी हातहरू लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं यी कार्डहरू सस्तोमा लिन सक्नुहुन्छ।
पकेट जोडीहरू खेल्दै: TT-22
यी कार्डहरूको उद्देश्य तपाईंको हातमा हुन सक्छ। सानो र मध्यम जेब जोडीको साथ, फ्लपले कमसेकम एक कार्डमा पेयरमा डेलिभर गर्न सक्दछ। यदि तपाईं डायमंड को holding र स्पाडको holding समातिरहनु भएको छ भने र बोर्ड डायकको ज्याक, क्लोभरका राजा र Sp कुद्देको साथ आउँदछ भने, तपाईंको हात लगभग बेकार हुन्छ। पकेट जोडीको सहि मान जब तिनीहरू तीन प्रकारको एक प्रकारको फ्लप हुन्छ। तीन प्रकारको-प्रकार पोकरमा महत्त्वपूर्ण छ, र यदि तपाईं यसलाई फ्लप गर्नुभयो भने, तपाईंले सबै भित्र जाने लक्ष्य राख्नुपर्दछ।
Ace-X उपयुक्त: A9s-A2s खेल्दै
यी कमजोर एसेसहरू हुन् जुन तपाईंले पनि खेल्नु पर्छ। यि खेल्न योग्य छन् किनकि तिनीहरू उपयुक्त छन्। यदि तपाईं इक्का-उच्च फ्लशको साथ आउन सक्नुहुनेछ, त्यहाँ अर्को मौका छ कि तपाईं अर्को खेलाडीको सम्पूर्ण स्ट्याक जित्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग सानो फ्लश छ।
यो कारण हो कि केही खेलाडीहरू हराउँछन् जब उनीहरू एक्सेसको एक जोडी फ्लप गर्दछन्, अन्य खेलाडीसँग समान जोडी हुन्छ तर राम्रो किकरको साथ। A-Xs हात बढाउने बिरुद्दमा राख्नु हुँदैन जबसम्म यसको सानो उठान र त्यहाँ केही खेलाडीहरू हुँदैनन्।
अन्य हातहरू खेल्दै
सम्भव भएमा अर्को हातबाट पनि अलग रहनु पर्छ। यहाँ उल्लिखित कार्डहरू ती हुन् जसमा तपाईंले काम गर्नुपर्नेछ, र सबैलाई छोड्न पर्छ किनभने उनीहरूले टेबलमा तपाईंको सम्भावना बढाउने छैनन्। पोकर खेल्दा, एउटा आधारभूत सिद्धान्त मनमा राख्नुहोस् – राम्रो हातहरू फ्लप पछि राम्रो हातहरू भन्दा पहिले, र राम्रो हातहरूले तपाईंलाई सजिलो निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
एकचोटि फ्लप बाहिर आयो भने, तपाईंले तुरून्त आफ्नो हातको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्छ। बोर्डमा हेर्नुहोस् र सम्भावित अन्य संयोजनहरू के के छन् हेर्नुहोस् र तपाईंको हात बाँकीसँग कति राम्ररी तुलना गर्दछ हेर्नुहोस्।
नोट: तपाईले यस चरणमा के हासिल गर्न चाहानुहुन्छ शीर्ष जोडीको साथ आउनु वा कम्तिमा ठूलो हात बनाउने राम्रो मौका प्राप्त गर्नु हो।
यदि तपाईंले जोडी प्राप्त गर्न सक्नुभयो तर माथिल्लो जोडी भन्दा सानो, र शर्तमा छ भने, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईं जुर्नुहोस्। यदि तपाईं माथि शीर्ष जोडी समात्नुहुन्छ र तपाईंसँग राम्रो किकर छ भने तपाईं शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ वा कल गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् कसरी कसरी हात खेल्दै छ: शीर्ष जोडी महान छ, तर यदि केही खेलाडीहरूले उठाए, त्यसो भए तपाईंको शीर्ष जोडी जूवाको लागि योग्य नहुन सक्छ।
ड्रमा रिमाइन्डरहरू: ड्र संभव छ यदि तपाईं अर्को कार्डमा फ्लस वा सीधा बनाउन सक्नुहुनेछ। यिनीहरूलाई ठूला हातहरू पनि भनिन्छ किनकि फ्लस र स्ट्रिटहरू प्राय: जीतहरू सिर्जना गर्न पर्याप्त हुन्छन्।
तर सबै ड्रहरू उस्तै बनाउँदैनन्। उदाहरण को लागी, of को7र am हीराहरुको He मा, दिल को and र Ace को डायमंड बोर्डको चार बहिष्कार हुनेछ। चार s हरू र ड्र we कमजोर छ किनकि हार्ट्सको4ले अन्य खेलाडीहरूलाई फ्लस सिर्जना गर्ने मौका दिन सक्छ।
अब, यदि तपाईंलाई सिधा फार्म बनाउन मिडिल कार्ड चाहिन्छ भने, यो पोकरमा गुत्शटको रूपमा चिनिन्छ। र राम्रो सिधा ड्राई लाई ओपन-एन्डर भनिन्छ। यसको उदाहरण हड्डीको on मा स्प्याड्सको and र is हो, स्पाडको7र डायमण्ड बोर्डको ज्याक। ओपन-एन्डरहरू गुत्शटहरू भन्दा राम्रो मानिन्छ।
तपाईले सानो फ्लटको सामना नगरेसम्म तपाई फ्लपमा हिम्मतको साथ धेरै भरोसा गर्नु हुँदैन। अर्कोतर्फ, फ्लस ड्रwsको नौवटा बहिष्कार हुनेछ र यसलाई कडा मानिन्छ। तपाईं फ्लपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईंले पालो याद गर्नुभयो भने, तपाईंले पनि आफ्नो मौका हराउनुहुनेछ जबसम्म दांव सानो हुँदैन।
यदि तपाइँ मोडमा सामेल हुनुभयो भने, तपाइँ २ वा players खेलाडीहरूसँग खेल्नु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै खेलाडीले यो चरणमा पुग्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि उहाँसँग कम से कम बोर्डको एक टुक्रा छ। यदि तपाईं एक हो जसले शर्त शुरू गर्नुभयो र पालोले धेरै परिवर्तनहरू प्रकट गरेन, तपाईंको शर्त जारी राख्नुहोस्। यदि पालो सीधा ड्र वा फ्लसको साथ आउँदछ भने, तपाईंको अर्को चालहरूमा सतर्क रहनुहोस्। अब यदि तपाइँ शर्त लगाउनुहुन्छ र अन्य खेलाडी उठाइएको छ भने, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ मोड्नु हुन्छ।
तपाईंले नदीका लागि तयारी गर्नु पर्छ, र यो कार्ड र टेबलमा उपलब्ध सबै जानकारी प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। खेलाडीले पूरा गरेको प्रत्येक खेलले तपाईंलाई हातको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्दछ। यदि खेलाडीले फ्लपको अगाडि उठ्छ र फ्लपमा प्रहार गर्दछ, पालो र नदी पनि, तब यसको मतलब यो हुन्छ कि उसले ठूलो हात समातिरहेको छ।
अब, यदि ऊ फ्लपको अगाडि उठ्छ, फ्लपमा दगुर्छ र पालो र नदी जाँच गर्छ, यो आशा गर्दछ कि उसको हात कमजोर हुनेछ। यो उत्तम हो कि तपाईले सकेसम्म बढी जानकारी स collect्कलन गर्नुपर्दछ र निर्णय लिँदा तपाईको आलोचनात्मक सोच प्रयोग गर्ने।
यदि तपाईं पोकरको खेलमा जीत गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले पोजिसनमा पनि ध्यान दिन पर्छ। स्थिति, खेलमा प्रयोग गरे जस्तै, तपाईंको प्लेसमेन्ट वा डिलर बटनको बारेमा रैंकको सन्दर्भ गर्दछ, जसले हातको बखतमा अन्तिम कसले कार्य गर्दछ भनेर बताउँछ। पोकरको खेलमा अन्तिम कार्य गर्नाले तपाईंलाई अधिक जानकारी दिनेछ, यसैले तपाईंलाई सही निर्णय लिन मद्दत गर्दछ। छोटकरीमा, तपाईं अवस्थाको नियन्त्रणमा बस्नुहुन्छ।
हो, पोकर एउटा खेल हो जुन तपाईं लामो अवधिमा हराउन सक्नुहुन्छ, र तपाईंले शर्त लगाउनुहुने पैसाको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो अझै पनि जुवाको एक प्रकार हो। तपाईं रकमको निर्णय गर्नुहुन्छ, तर डेकबाट बनाइएको कार्डहरू तपाईंको नियन्त्रण बाहिर छन्।
यो भाग्यको तत्वको साथ आउँदछ जुन यसले रोचक बनाउँदछ तर धेरैका लागि निराशाहरूको स्रोत पनि हुन सक्छ। यो खेल तपाइँको निर्णय क्षमता मा परीक्षण गर्नेछ, र महान निर्णय को एक श्रृंखला एक अज्ञात कार्य द्वारा खराब गर्न सकिन्छ। यो पोकर जस्तो कार्ड गेमको प्रकृति हो, र तपाईं यसको लागि तयार हुनुपर्छ।
त्यहाँ खेल मा केहि कारकहरु रहेकाले, तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कुरा भनेको रमाईलो गर्नु र मजा लिनु हो। यदि सही तरिकाले खेलेमा, पोकरले केही राम्रो जीत ल्याउन सक्छ, र तपाईं अन्तमा पनि रमाउन सक्नुहुन्छ!
टेक्सास होल्डम पोकर जुवाको केही तत्वहरूको साथ एक रमाईलो कार्ड खेल हो किनभने तपाईंसँग डिल गरिएको कार्डहरूमा नियन्त्रण छैन।
पोकर खेल्दा प्रयोग गर्न सकिने सामान्य रणनीति तंग खेल्नु हो।
शीर्ष कार्डहरू र हातको शक्ति बुझ्नु यस खेलको मजा लिन र घरमा भाँडो लिन महत्वपूर्ण छ।
त्यहाँ खास रणनीतिहरू छन् जुन एक खेलाडीले प्रयोग गर्न सक्दछन् प्री-फ्लप, नदी, र मोडमा।
यो खेलमा आफ्नो स्थान थाहा पाउन र यसको फाइदा लिन महत्वपूर्ण छ।